Guga 2017 wuxuu ahaa kii ugu kululaa taariikhda la diiwaan geliyo | Saadaasha Shabakadda
Guga 2017 wuxuu ahaa kii ugu kululaa taariikhda la diiwaan geliyo
Isbaanishka, muddooyinkii ugu dambeeyay, rikoodhyo ayaa si jaban loo jabiyaa xilli kasta oo sanadka ah. Xilliga gu'ga ee aan hadda dhaafnay qiimaha celceliska ayaa ka sarreeyay sidii caadiga ahayd tan iyo 1965, oo ahayd markii ay AEMET bilaabeen inay yeeshaan diiwaanno mideysan dalka oo dhan.
Tan iyo sanadkaas, Isbaanishka ma aysan soo marin gu 'kulul sida tan 2017. Laakiin kaliya maahan inaan ka hadalno kuleylka badan, laakiin sidoo kale a hoos u dhaca roobka ilaa 23%. Natiijo ahaan, xagaaga wuu ku adkaan karaa meelaha qaarkood, gaar ahaan meelaha uusan roobku ka di'in haba yaraatee ama aan waxba ka jirin xilligaas.
1 Heerkulka gu’ga 2017
2 Guga 2017 roobka
Heerkulka gu’ga 2017
Laga soo bilaabo Maarso 1 ilaa May 31 celceliska heerkulka ayaa ahaa 1,7 darajo Celsius ka sareeya ee celceliska qaadashada sida tixraac ahaan sannadihii 1981-2010); taasi waa, waxay ahayd 15,4 ° C. Qiimahani wuxuu 0,06ºC ka sarreeyaa qiimihii hore ee ugu sarreeyay, ee la gaadhay 2011.
Haddii aan ka hadalno aagagga, AEMET waxay iftiimineysaa inay si gaar ah ugu kululaatay Navarra, Aragon, gudaha Andalusia, Basque Country, Castilla y León iyo La Rioja; diirran inta kale ee jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic, iyo inta u dhexeysa diirimaadka iyo diirimaadka aadka u kulul ee jasiiradaha Canary.
Heerkulka ugu sarreeya waxaa laga gaarey Orense (37,6ºC) Maajo 24, garoonka Granada (37ºC) Maajo 25, Bilbao (36,4ºC) Maajo 25, garoonka Lanzarote (36,1ºC) Abriil 17 iyo Gran Canaria (34,2ºC) sidoo kale Abriil 17.
Guga 2017 roobka
Xilligii guga ee la soo dhaafay 133 litir halkii mitir oo laba jibbaaran ayaa ku dhacay celcelis ahaan, taas oo ka dhigan a 23% dhimis. Sidaas oo ay tahay, Bishii Maarso waxay lahayd dabeecad aad u qoyan oo leh 29% roobab badan, laakiin Abriil aad ayuu u qallalay maaddaama uu da'ayay 60% wax ka yar sidii caadiga ahayd, bishii Maajona wuxuu sameeyay 23% ka yar. Kaliya waxay ahayd xilli qoyan koonfurta-galbeed ee Andalusia ee koonfur-bari ee Bulshada Valencian.
Wixii macluumaad dheeraad ah, riix halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Guga 2017 wuxuu ahaa kii ugu kululaa taariikhda la diiwaan geliyo
Barakacayaasha cimilada oo sii kordhaya